Trump oo wada qorshe uu ciidamada Mareykanka uga saarayo Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaTrump oo wada qorshe uu ciidamada Mareykanka uga saarayo Soomaaliya
October 14, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Madxweyne Trump. [Sawir Hore]
Washington-(Puntland Mirror) Madaxweyne Donald Trump ayaa la taliyeyaashiisa u sheegay in uu doonayo in ciidamada Mareykanka uu ka saaro Soomaaliya, sida ilo-wareedyo ka ag dhow ay u sheegeen warbaahinta Bloomberg, taasoo qeyb ka ah balanqaadkiisii ahaa in ciidamada Mareykanka uu dalka dib ugu soo celin doono.
Gaashaandhiga Mareykanka ayaa bilaabay qorsheyaasha qabyada ah ee Madxweynaha, waxaana wadaxaajoodyada ku lug lahaa La Taliya Amniga Qaranka Mareykanka Robert O’Brien, Xoghayaha Difaaca Mark Esper iyo masuuliyiin kale, sida ilo-wareedyadu ay u sheegeen Bloomberg.
Mareykanka ayaa 650 ilaa 800 askari ay ka joogaan gudaha Soomaaliya, sida ay sheegeen Taliska Mareykanka ee Afrika, kuwaasoo ay kamidyihiin ciidamo gaar ah oo taageero dhanka tabobarka ah siiya ciidanka Soomaaliya. Inta badan ciidankan ayaa la geeyay Soomaaliya intii Trump uu ahaa Madxweynaha.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wareysi Khadka taleefoonka ah ugu sheegay Bloomberg in uu jecelyahay in ciidamada Mareykanka ay joogaan, isaga oo intaas ku daray in uu aaminsanyahay in dalkiisa oo caawimaad ka helaya Mareykanka ay keenayso in laga adkaado maleeshiyada Al-Shabaab.
“Runtii waanu bogaadinaynaa taageerada Mareykanka, waxaana ku qanacsanahay waxa Mareykanku ay qabteen, waana jeclaan lahayn in aan aragno in ciidamada ay sii joogaan ilaa shaqadu boqolkiiba boqol dhammaato,” ayuu yiri Madaxweyne Farmaajo.
Trump ayaa bilaabay bartamihii 2017-ka in uu ciidamo badan u diro Soomaaliya taasoo qeyb ka ah dadaalada la dagaalanka argagixisada.
October 14, 2020 Trump Demands a Plan to Withdraw U.S. Troops From Somalia
December 21, 2020 Ciidamada Mareykanka ee hoostaga Holwgalka AFRICOM oo bilaabi doona in ay ka baxaan Soomaaliya
Hoggaamiyihii Taliban-ta Pakistan oo lagu dilay duqeyn ay diyaaradaha Mareykanku ka geysteen gudaha Afghanistan
Islamabad-(Puntland Mirror) Hoggaamiyihii Taliban ee Pakistan ayaa lagu dilay duqeyn ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanku ay ka geysteen dalka Afghanistan. Mullah Fazlullah ayaa ahaa ninka loogu raadinta badnaa Pakistan, kaasoo caan ku ahaa [...]
Maamulka Somaliland oo raba in uu saldhigyo ciidan badeed siiyo Britain iyo Russia
Hargeysa-(Puntland Mirror) Maamulka Somaliland ayaa doonaya in uu martigeliyo saldhigyo ciidan badeed oo ay leeyihiin UK iyo Russia. Asbuucaan, xoghayaha difaaca Britain Gavin Williamson ayaa safar aan horey loo sii sheegin ku tagay Somaliland isaga [...]